त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउने मागः गोर्खाल्यान्डले मात्रै पहाड़मा स्थायी शान्ति ल्याउनेछःक्रामाकपा - खबरम्यागजिन
HomeBreaking Newsत्रिपक्षीय वार्ता बोलाउने मागः गोर्खाल्यान्डले मात्रै पहाड़मा स्थायी शान्ति ल्याउनेछःक्रामाकपा
दार्जीलिङः जीएमसीसी (गोर्खाल्यान्ड मूभमेन्ट को-अर्डिनेशन कमिटी)-ले केन्द्र सरकारसमक्ष गोर्खाल्यान्डको मुद्दमा शीघ्र त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउने अनुरोध गरेको छ। आज यहाँको चौकबजारमा आयोजित एक जनसभालाई सम्बोधन गर्दै जीएमसीसीको एक मुख्य घटक दल क्रामाकपा नेता अरूण घतानीले यस्तो अनुरोध गरेका हुन्। उनले भने-गोर्खा जातिले संविधानको आधारमा आफ्नै राज्य हुनपर्छ भन्ने माग उठाउँदा केन्द्र सरकारले कुम्भकर्णको निंद्रामा परेको जस्तो अभिनय गरिरहेको छ। यसैले अब केन्द्र सरकारलाई यस कुम्भकर्णे निंद्राबाट व्यूझाउँनको लागि दिल्लीनै गएर झक्झकाउनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ।
यसैले जबसम्म केन्द्र सरकारले त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउने छैन, तबसम्म देशका गोर्खा जाति मान्ने छैनन्। यसैले भारत सरकारले गोर्खा जातिको न्यायसंगत मागमाथि गम्भीरता देखाउँदै शीघ्र त्रिपक्षीय वार्ता बोलाउनैपर्छ। तब मात्रै पहाड़को स्थिति सामान्य बन्नसक्ने पनि उनले संकेत दिए। आज यहाँको रेलवे स्टेशनदेखि शुरू भएको गोजमुमो र क्रामाकपाको संयुक्त जुलूसमा जनताको व्यापक सहभागिता थियो, जसले विनय तामाङ, अनित थापाको विरोधमा नाराबाजी गर्दै चौकबजारमा आएर जनसभामा परिणत भएको थियो।
यसै जनसभालाई सम्बोधन गर्दै क्रामाकपा नेता घतानीले भने-अहिले धेरैले पहाड़का जनता नेताविहीन बनेका छन् भनिरहेका छन्। तर जनता नेताविहीन होइन, प्रत्येक जनता नेता बनिसकेका छन्। प्रत्येक जनताले चौकबजारको सुमेरू मन्चमा आएर गोर्खाल्यान्डको लागि भाषण दिइरहेका छन्। नेता कुनै समय भूमिगत पनि हुनपर्छ, कुनै समय जेलमा पनि पर्नुपर्छ। यस्तो स्थितिमा जनता आफैले आन्दोलनलाई अघि बढाउनुपर्छ। उनले अझै अघि भने-काँधमा जिम्मेवारी, छात्तीमा इमान्दारी छैन भने उनीहरुलाई नेता मान्नु हुँदैन। यसैले छात्तीमा इमान्दारी नभएका नेतालाई जनताले चिन्न सक्नुपर्छ।
उनले गोजमुमोबाट अलग भएका विनय तामाङ र अनित थापामाथि कटाक्ष प्रहार गर्दै भने-विनय तामाङ र अनित थापाले गोजमुमोबाट अलग भएर पनि गोर्खाल्यान्डको कुरानै गरिरहेका छन्। तर एकतर्फ गोर्खाल्यान्डको माग गर्ने नेता अनि समर्थकहरुलाई गोली ठोक्ने प्रयास भइरहेको छ, यसको ठीक विपरीत अर्कोतर्फ गोर्खाल्यान्डकै माग गर्ने नेतालाई पुलिसको कठोर सुरक्षा प्रदान गरिन्छ। के जनताले यस्तो सानो कुरा पनि बुझ्दैन? यसैले बंगालको टीममा जानेहरुले पनि गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई बुझ्न आवश्यक छ। भङ्गालिएर होइन, अङ्गालिएर गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनलाई सफल बनाउनुपर्छ।
यसो हुनसके जनता आफैले नेताहरुको सुरक्षा गर्नेछन्। उनले आज जीएमसीसीलाई चौकबजारमा जनसभा गर्ने प्रशासनले अनुमति नदिएको बताउँदै भने-दार्जीलिङ जिल्ला प्रशासनले गोर्खाल्यान्डको आवाज तीव्र पार्ने पार्टीहरुको गठबन्धनलाई जनसभा गर्ने अनुमति दिंदैन। तर गोर्खाल्यान्डको विरोध गर्ने सबैलाईनै अनुमति प्रदान गर्छ। हिजो मात्रै जिल्ला प्रशासनले गाड़ीधुरामा राज्यका पर्यटन मन्त्री गौतम देवलाई जनसभा गर्ने अनुमति प्रदान गरेको थियो भने कालेबुङमा डा. हर्कबहादुर छेत्रीलाई पनि अनुमति दिएको थियो। यसरीनै दुइ दिनअघि अनित थापालाई पनि खरसाङमा सभा गर्ने अनुमति दिएको थियो, तर जीएमसीसीले जनसभाको अनुमति माग्दा कानून व्यवस्थाको बहाना देखाएर अनुमति दिइँदैन। अब हेर्नुछ, आगामी9सितम्बरको दिन विनय तामाङले दार्जीलिङमा जनसभा गर्ने अनुमति पाउँछन् कि पाउँदैनन्।
उनले जीएमसीसीलाई जनसभा गर्ने अनुमति नदिइएको कारणनै आफू गोजमुमो र क्रामाकपाको जनसभाबाट बोल्न बाध्य बनेको बताउँदै प्रशासनले कसैलाई काख अनि कसैलाई पाखा गर्ने नीति अप्नाइरहेको आरोप लगाए। उनले भने-गोर्खा जातिभित्रकै केही मीरजाफरहरूलाई पैसामा लोभ्याएर अलग बनाउँदा गोर्खाल्यान्डको माग समाप्त हुन्छ भन्ने राज्य सरकारको सोंच पूर्णरूपले गलत हो। केही नेताहरु बिक्री हुँदा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन समाप्त हुनेछैन। यदि सरकारले पहाड़मा स्थायी शान्ति चाहन्छ भने गोर्खाल्यान्डको गठन अनिवार्य छ।
विमल गुरूङले भने, ‘तयारी बस्नु, म आउँदैछु’ : विमलको स्वागतमा लाखौं जनता सडक उत्रने (22,742)